ShweMinThar: February 2011
အမျိုးသားတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျမများဘဲ နုပျိုသွားစေနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
အလှအပဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါ။ အမျိုးသားတွေနဲ့ လားလားမျှ မဆိုင်ဘူးလို့
ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားကြပေမယ့် အခုခေတ်ကြီးမှာတော့ အလှအပကို
အမျိုးသမီးတွေသာမဟုတ်၊ အမျိုးသားအများစုပါ စိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ။
အထူးသဖြင့် အရွယ်ရလာတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာရှိတဲ့အသက်ထက်
ပိုပြီးနုပျိုချင်ကြပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျမများဘဲ
ညစ်ညစ်းဝါကြင်စေနိုင်တဲ့အတွက် ရုပ်ကိုအင်မတန်မှ ရင့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းတံတွေး ပေကျံနေတဲ့သွားတွေဟာ လုံးဝကြည့်မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့်
နပျိုချင်ရင် ကွမ်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ မနက်တစ်ခါ ၊ ညတစ်ခါ
(၂) Moisturizer လိမ်းပါ
အမျိုးသားသုံး Moisturizer ဒါမှမဟုတ် Cream တစ်ခုခုလိမ်းပေးပါ။
မျက်နှာတင်မဟုတ် လက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပါ Body Lotion လိမ်း ပေးပါ။
လက်အသုံးပြုရများတဲ့အခါ မျက်နှာထက်စာရင် ပိုပြီးကြမ်းတမ်းနေတတ်တဲ့အတွက်
လက်လိမ်းခရင်မ်တစ်ခုခုကို လက်လှမ်းမီ ရာမှာ ထားထားပါ။
နေရောင်ခြည်ဟာ အရေပြားကို များစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အတွက်
နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် SPF ပါတဲ့နေရောင်ကာ လိမ်းဆေးကို
(၄) မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ နှုတ်ခမ်းမွှေး မထားပါနဲ့
တချို့အမျိုးသားတွေဟာ ပါးပြိုင်းမွှေး၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးကို
နှစ်သက်စွာထားတတ်ကြပါတယ်။ ရုပ်နုချင်ရင်တော့ ဒီအမွှေးတွေကို
ပုံမှန်ရိတ်ပေး ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီအမွှေးတွေက ရုပ်ရင့်စေလို့ပါ။
(၅) နှာခေါင်းမွှေး၊ နားသယ်မွှေးညှပ်ပစ်ပါ
အမျိုးသားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ မလိုချင်တဲ့နေရာတွေကနေ အမွှေးတွေ
ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နှာခေါင်း နဲ့ နားထဲကအမွှေးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒီအခါ နုတ်ရင်နုတ်၊ မနုတ်ရင် ညှပ်ပစ်လိုက်ပါ။
မျက်ခုံးမွှေးရိတ်ဆိုလို့ အမျိုးသမီးတွေလို တစ်တန်းတည်းပုံဖော်ပြီး
ရိတ်ရုံညှပ်ရုံလေးပါ။ အထူးသဖြင့် မျက်လုံးနှစ်ခုကြားက မျက်ခုံးမွှေးကို
ရိတ်သင့်ပါတယ်။ မျက်ခုံးမွှေးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာ ဂုဏ်ယူ စရာမဟုတ်ပါဘူး။
အရောင်လွင်လွင်ဝတ်ပေးပါ။ အရမ်းအရောင် တောက်လွန်းရင် လည်း
အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက် ငယ်မူပြန်နေသလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်မှန်အစား မျက်ကပ်မှန်ပြောင်းတပ်ခြင်းက နုပျိုစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
တချို့ကျတော့ မျက်မှန်နဲ့မှ ကြည့်ကောင်းပြီး သန့်ပြန့်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက်
လူကြီးဆံပင်ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့ ပြောင်သိမ်းထားတာတွေ၊ ဘေးခွဲကြီးတွေအစား
လူငယ်စတိုင် ဆံပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ပါ။ ဆံပင်ပုံစံက ရုပ်ကို အများကြီး
မှာသွားပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့ လမ်းလျှောက်တာတို့လုပ်ပေးပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်နေကိုယ်ထားမှန်ကန်စေသလို စိတ်ဖိစီးမှု
ဖြေဖျောက်ပေးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုမရှိတဲ့အခါ မျက်နှာအရေပြားလည်း
မတွန့်တော့ပါဘူး။ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေကာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို
အောက်ဆီဂျင်ကောင်းစွာ ရောက်ရှိစေတဲ့အတွက် လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါတယ်။
Credit: The Chic Magazine – No4. February 2011
Posted by Alex Aung at 10:06 PM2comments:
လူတိုင်းအထီးကျန်မှုကို ခံစားဖူးကြမှာပါ။ တချို့က သူတို့ဘဝမှာ ဘယ်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မရှိပေမယ့် နာကျင်မှု ဝေဒနာ၊ အထီးကျန်မှု ဝေဒနာကို မခံစားရပါဘူး။
ဒါဟာ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ ဘဝကို အသားကျနေလို့ပါ။ တချို့တွေကတော့ ပြင်ပလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်း အသင်းတွေနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ကြားမှာ ကျင်လည်ရင်း သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အချိန် တွေကို ကုန်လွန်စေကြပါတယ်။ အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားရသူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ဟာ သူတို့စိတ်အခြေခံကို မပြည့်စုံခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး လူတွေက သူတို့ကို ငြင်းဆန် နေတယ်လို့ ခံစားရကာ ဘယ်လိုမှ စိတ်ဟာ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တော့တာပါ။
စိတ်ပညာရှင် ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်အရ အထီးကျန်သူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ စိတ်ဓာတ် ကျနေသူ တစ်ဦးလိုပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အထီးကျန်တဲ့ စိတ်ကြောင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်း အဝိုင်းထဲမှာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေ လုံလောက်မှု မရှိတော့ပဲ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် လူတစ်ယောက် အပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသူတွေ ဟာ ဒီလို အထီးကျန်မှု ဝေဒနာကို ပိုပြီး ခံစားရတက်ပါတယ်။ မိမိက ခင်သလောက် ပြန်မခင်တာမျိုး၊ ကိုယ်ချစ်သလောက် ပြန်မချစ်ဘူးလို့ ထင်တာမျိုးတွေကြောင့် ကိုယ်တိုင်ပဲ စိတ်ထဲက ခံစားနေရတဲ့ တစ်ဖက်သတ် ခံစားမှုမျိုးပါ။ ဒီလို ခံစားမှုမျိုးက အချိန်ကြာလာရင် စိတ်ဘဝင်မကျမှုအပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားမှုလည်းလျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။
သင်ခံစားနေရတာကို မျှဝေခံစားပေးနိုင်မယ့် ဒါမှမဟုတ် အကြံပေးနိုင်မယ့် အဖော်သာမရှိရင် ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ အရမ်းခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ခွဲခွာရချိန်တွေမှာ ပိုပြီး ခံစားကြရပါတယ်။ သင့်ဘဝမှာ ဒီလို အထီးကျန်မှုတွေ ပြေပျောက်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းအချို့ ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ သင့်အလုပ်ပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ် ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သင်ဝါသနာမပါတဲ့ အလုပ်ဆိုရင်တာ့ သင်ဝါသနာပါတဲ့ တခြားအလုပ်ကို အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
သင့်အဖော်ကြောင့် အထီးကျန်တယ်လို့ ခံစားရရင်
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို စတင်ပါ။ အမျိုးသားတိုင်းက အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ အချို့အရာတွေက ကိုယ်တိုင် ပြောပြဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေကတော့ အိမ်ကို ပြန်လာလို့ သူတို့ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ မိန်းမမျိုးနဲ့ ဆိုရင် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် တခြားပျော်စရာ နေရာတွေကို သွားပြီး စိတ်ကို ဖြေဖျောက်ကြမှာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုတော့ နားလည်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အဖော်နဲ့ ခံစားချက်တွေကို တိုင်ပင်နိုင်ဖို့ သီးသန့် အချိန် တစ်ရက်လောက်ယူပြီး ခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောဆိုပါ။
လူတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့ အသင့် မဖြစ်သေးတဲ့အခါ
အဓိကကတော့ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်ပြီး မေးကြည့်ဖို့ပါပဲ။ ဒီကိစ္စကို သင်ဟာ တစ်ယောက်ထည်း ရှောင်ပုန်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ သင်တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်မှုကို ခံစားနေရမှာပါ။ သင့်ခံစားချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ပြန်မေးကြည့်ပါ။ "သူနဲ့ မတွေ့ရချိန်တွေမှာ သူ့ကို လွမ်းနေလား၊ သူမရှိရင် သင်ပျော်နေလား၊ သူ့ကို မြင်လိုက်ချိန်တိုင်း ကြည်နူးမိလား၊ သူနဲ့အတူ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲသွားရင် ပျော်ရွှင်မိမယ်လို့ ခံစားရလား၊ သူ့ကို လက်ထပ်ရင်ရော သူ့ဘက်က ဘယ်လို တုံ့ပြန်မလဲ၊ သူရဲ့ အပြုအမူအပေါ် သင်ဘယ်လိုတွေ ခံစားရလဲ" အဲဒီ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေတွေက သင့်ကို အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်တွေ အတွက် သင့်ဘက်မှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေရင် ရှောင်ပုန်းမနေပါနဲ့။ ဒါဟာ အကောင်းဆုံး အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
မိသားစုနဲ့ ဝေးလို့ အထီးကျန်ခြင်း ခံစားရရင်
ကိုယ်ချစ်ခင် နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ အပြီးအပိုင် ခွဲခွာရတာဟာ ဖြေမဆည်နိုင်တဲ့ ဝမ်းနည်းမှုပါ။ ဒါပေမဲ့ လောကဖြစ်စဉ်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ခဏတာ ခွဲခွာမှုအတွက် အထီးကျန်တယ်ဆိုရင် နောက်လည်း သွားတွေ့နိုင်ကြောင်း သင်သတိရပါ။ သင့်နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ တခြားသင်ဝါသနာပါတဲ့ အားကစားတွေ၊ စာဖတ်ခြင်းတွေ၊ ဂေါက်ရိုက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
ချစ်သူနဲ့ ခွဲခွာရလို့ အထီးကျန်ရင်
ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာတွေကို စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ ချရေးလိုက်ပါ။ ကဗျာနဲ့ စာတွေကို သင့်စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း ရေးချပြီး သတိရတိုင်း ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတာမျိုး၊ ဂိမ်းကစားတာမျိုး ပြုလုပ်ပါ။ ရယ်စရာ ဟာသကားတွေ ကြည့်ပါ။
Posted by Alex Aung at 9:43 PM No comments:
Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ
16 Aug 10, 18:26
ဆရာခင်ဗျား ကိုယ့်ကိုယ်ကို အူကျ-မကျ သိရအောင် မည်သို့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးနိုင်ပါသလဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။
မေးထားတာတွေရှိလို့ ၂ ခါ ဖြေထားသေးတယ်။ ဒီတခါ စမ်းသပ်နည်းပါမေးလို့ ပိုစုံအောင်ရေးပါမယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ အဲဒီနေရာမယ် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေ အဓိက ၄ မျိုး ရှိတယ်။
1. Hernia အူကျတာ၊
2. Hydrocele မုတ္တရောဂါ၊
3. Epididymitis ကျားအစေ့ရောင်ခြင်း၊
4. Varicocele (ဗေရီကိုဆီးလ်)၊ တွေ ဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားတိုင်းရဲ့ Scrotum ကပ်ပယ်အိတ် တဖက်စီထဲမယ် Testis ဝှေးစေ့ တလုံးစီ ရှိတယ်။ အစေ့အထက်မှာ အထက်-အောက် တန်းနေတာကို အကြောလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာ Arteries and Vein သွေးကြောတွေ၊ Nerve အာရုံကြောနဲ့ Vas deferens သုတ်ရည်ပြွန် ရှိပြီး၊ အားလုံးက ရောကပ်နေကြတာ လက်ချောင်းလေး တချောင်း စာလောက် တုတ်တယ်။
ကပ်ပယ်အိတ်ထဲကို မရှိရမဲ့ အူက ဗိုက်ထဲကနေ ကျလာတာကို Hernia အူကျတာ ခေါ်ပါတယ်။ မုတ် ဆိုတဲ့ မုတ္က Hydrocele ကတော့ အစေ့ကို ဖုံးနေတဲ့ အိတ်ထဲက ပုံမှန်ရှိရမဲ့ ခပ်ပါးပါးအရည်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာတာကို ခေါ်တယ်။ အူကျတာနဲ့ မုတ်က မနာတာ တူတယ်။ အသက်အရွယ် မရွေးတာ တူတယ်။ အကြော-အစေ့ ရောင်တယ်ဆိုတာ အတော် နာတယ်။ ဝှေးစေ့ ရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ဖေါင်းကြွနေတာကို Varicocele ခေါ်တယ်။ သူလည်း မနာဘူး။
ဒီရောဂါ လေးမျိုးအပြင် ရှားရှားပါးပါးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ Scrotal elephantiasis ဆင်ခြေထောက်ပိုးကြောင့် မုတ်လို ဖြစ်တာ၊ Hydrocele of testis အစေ့ မုတ်၊ Spermatocele သုတ်ပိုးအိတ်၊ Testicular torsion အကြောထုံးတာ၊ Testicular cancer အစေ့ ကင်ဆာ၊ TB အစေ့ တီဘီတွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်ထူးဆန်းတာတခုက Undescended testis မွေးကတည်းက အစေ့က တဖက်ဖြစ် နှစ်ဘက်လုံးဖြစ်ဖြစ် ကပ်ပဲ့အိတ်ထဲကို ကျမလာတာ။ အစေ့ တဖက်ထဲသာ စမ်းရရင် ဒါဖြစ်မယ်။
အူကျတာက မတ်တပ်ရပ်ရင် ကျလာမယ်။ ချောင်းဆိုး-နှာချေရင်၊ ပြေးရင်၊-ခုန်ရင်၊ အလေးအပင်မရင်၊ ဗိုက်ကို ညှစ်လိုက်ရင် ထွက်လာမယ်။ အိပ်နေရင် သူ့ဖါသာ ဖြစ်စေ၊ သွင်းပေးလို့ဖြစ်စေ ပြန်ဝင်သွားမယ်။ ၁ လ၊ ၁ နှစ်ကနေ၊ ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ အထိ ကြာနိုင်တယ်။ ကြာကြာ ဖြစ်နေသူမှာ ယုတ်တရက် နာလာတာကတော့ အရေးပေါ်။ ပြန်မ၀င်နိုင်ဘဲ ကျနေတဲ့ အူက ခေါက်နေလို့။ အူက ရောင်-နာ၊ အူပိတ်တာ ဖြစ်လာတယ်။ နေ့နေ့-ညည ခွဲရလိမ့်မယ်။
အဲဒီ လက္ခဏာတွေက ဘာရောဂါဆိုတာ ပြောနေပြီ။ သေခြာအောင် လုပ်တော့မယ်။ ကျလာတဲ့ အူဆိုတာကို အစေ့ရဲ့ အပေါ်မှာ၊ သီးသန့် စမ်းလို့ ရတယ်။ မဖြစ်တဲ့ ဘက်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ချောင်းအတု ဆိုးခိုင်းရင် ကျကျလာလို့၊ ဖေါင်းဖေါင်း လာမယ်။ ကျလာတဲ့နေရာက ဗိုက်အောက်ပိုင်း၊ ပေါင်ခြံအထက် နေရာက ဖြစ်တယ်။ လှဲအိပ်ခိုင်းတာနဲ့ ၀င်သွားမယ်။ ပြန်သွင်းပေးရင် ထွက်လာတဲ့ နေရာဆီကို သွင်းပေးရတယ်။ အတိအကျ ပြောရင် ကပ်ပဲ့အိတ် အထက် တည့်တည့်၊ ဆီးစပ်က အရိုးမာမာရဲ့ ဖြစ်တဲ့ဘက် အထက်-ဘေး ၂ လက္မလောက် နေရာပါ။ ကျနေတဲ့အူကို ပြန်သွင်းပြီး၊ မတ်တပ်ရပ် အနေအထားမှာ အဲဒီနေရာမှာ စမ်းတဲ့သူက လက်နဲ့ ဖိ-ပိတ်ထားရင် ချောင်းဆိုးခိုင်းပေမဲ့ အူက ကျမလာဘူး ထွက်ပေါက်ကို ဖိ-ပိတ်ထားလို့။ ဒါဆို အူကျရောဂါ သေခြာပြီ။
ထွက်လာတဲ့ နေရာဆိုတာ ဘာလဲ။ ဗိုက်ကိုဖုံးကာပေးထားတဲ့ ကြွက်သားလွှာက ၃-၄ ထပ်ရှိတယ်။ (ဒါရိုက်ရှင်) အမျိုးမျိုး။ အထက်-အောက်၊ တစောင်း။ ကြွက်သားတွေက ပေါင်ခြံထိပ်က အရွတ်မှာ လာတွယ်တာတွေက အူကျတာနဲ့ ဆိုင်တယ်။ လာတွယ်ကြတဲ့အခါ ဂဟေဆက်သလို မဟုတ်ဘူး။ အဟလေးတွေ ကျန်နေတယ်။ အဲဒီနေရာလေးတွေက အပေါက် ဖြစ်နေလို့ အားနည်းချက်တွေဘဲ။ ဗိုက်ကို တင်းအား-ညှစ်အား လုပ်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲ ရှိတာတွေဟာ အပေါက် နေရာတွေကနေ ထွက်ဘို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ထွက်လာနိုင်ရင် Hernia ဖြစ်ပြီပေါ့။ ခေါ်တော့သာ အူကျတယ်လို့ အလွယ် ခေါ်တာ၊ ဗိုက်ထဲက ထွက်လို့ရတာ ထွက်မှာဘဲ။
ကျလာတယ်ဆိုတာ အူသပ်သပ် ကျတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကြွက်သားတွေရဲ့ အတွင်းမှာ ဗိုက်တပြင်လုံးကို ဖုံးနေတဲ့ အလွှာပါးပါး ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအလွှာက ထွက်မဲ့နေရာကနေ တဖြေးဖြေးချင်း စူစူထွက်လာတာမို့ အိပ်ကလေးဖြစ်ပြီး၊ အိတ်ထဲမှာက အူ စသဖြင့်။ အူကလည်း အူသိမ်ဖြစ်တာ အများဆုံး။ ညာဘက်မှာ ဖြစ်ရင် အူအတက်ဆိုတာလည်း ပါနိုင်တယ်။
စုံအောင် ရေးပါရစေ။ Hernia ဆိုတာ ယောက်ျားတွေ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ၀တ်ရာမှာသာ ဖြစ်တယ် ထင်ကြမယ်။ မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးတွေလည်း အူကျတာ ဖြစ်တယ်။ နည်းပါတယ်။ ယောက်ျားတွေကို ခွဲပေးဘူးတာ မရေတွက်နိုင်ပေမဲ့ အမျိုးသမီး ၂ ယောက်သာ ခွဲပေးရဘူးတယ်။ သူတို့မှာ ကပ်ပဲ့အိတ် မဟုတ်ဘဲ မ-အင်္ဂါ နှုတ်ခမ်းထဲကို ကျလာတယ်။
အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ပေါင်ခြံမှာ ဖြစ်တာကို Inguinal hernia ခေါ်တယ်။ ပေါင်ထိပ်မှာဖြစ်ရင် Femoral hernia ခေါ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေ ပိုဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေတောင် ဖြစ်သေးတာ။ ချက်မှာ ကလေးငိုရင် စူထွက်လာတာကို Umbilical hernia ခေါ်တယ်။ သူ့ကိုတခါတည်း နာမယ်ပေးတယ် မဟုတ်လား။ "ချက်ဖေါင်း" လို့။ ထပ်ရှိသေးပြန်တယ်။ ဗိုက်ခွဲထားတဲ့ ချုပ်ရိုးနေရာကနေ စူထွက်တာကို Incision hernia ခေါ်တယ်။ ဗိုက်နဲ့ ရင်ခေါင်းကို ပိုင်းခြားထားပေးတဲ့ ကြွက်သားကြီးမှာ ဖြစ်ရင် Diaphragmatic hernia ခေါ်တယ်။ တခြားဟာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဆေးပညာ သင်သူတွေ အတွက်သာ သိဘို့ လိုပါတယ်။
ဘာလို့ အူကျတာလဲ။ ရေးပြခဲ့တဲ့ ဗိုက်ဖုံးကြွက်သား ခန္ဓာဗေဒမှာ အားနည်းနေသူ၊ ဗိုက်ကို တင်းအားဖြစ်စေမှာတွေ လုပ်တာ များလို့ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ မဖြစ်စေချင်သူတွေ ဒါမျိုး ဆင်ခြင်ရမယ်။ အပြေး-အခုန်၊ အလေးမ၊ အတက်-အဆင်း၊ အားကစားသမား ရောဂါလို့ ထင်ရတယ်။ အမှန်က အဲလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာဗေဒက (ပါဖက်) ဆိုရင် မဖြစ်ပါဘူး။
Hernia သေခြာရင် ခွဲရမှာပါ။ မခွဲဘဲ ယာယီ သက်သာအောင် လုပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေ၊ အခွဲ မခံသင့်သေးသူတွေ ဥပမာ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါရှိနေသူတွေ အတွက်သာ ညွှန်းပါတယ်။ ခါးပတ်တမျိုး ပတ်ထားရတယ်။
ခွဲစိတ်တာက ထမင်းစားရေသောက် ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆရာဝန်များ ခွဲတာ-စိတ်တာ လက်တွေ့သင်ရင် Hydrocele တတ်ပြီးရင် Hernia ခွဲရတယ်။ အတွေ့အကြုံတော့ လိုတယ်။ ခွဲပြီးမှ ပြန်ဖြစ်သူတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေ အတွက်တော့ နည်းနည်း ပိုလုပ် ပေးရတာမျိုး ရှိတယ်။ ဖါထေးရတာမျိုး။ ဇရာက ဆရာဝန်တွေကို ပိုဒုက္ခပေးတယ်။
Posted by Alex Aung at 9:30 PM No comments:
Penile retraction တိုနာ ရောဂါ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃၁)
September 03, 2010 12:16 AM
ကျွန်တော့်အသက် (၂၃)နှစ်ရှိပါပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။ လိင်ဝင် (တိုနာ) ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြပေးပါဦး။ လိင်ဝင်တာကို ဆီးခုံမွှေးရှူပေးရင် ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ တိုနာရောဂါကို ကြောက်ရွံ့နေမိလို့ ဘယ်လို နေထိုင်ရမလဲ ဆိုတာကိုပါ ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒီ ကျန်းမာရေး ပြဿနာကို အရပ်စကားသဘော ပြောနေကြတာ အမှန်ဘဲ။ "တိုနာ" လို့ သာမက "သိုဝင်တာ" လို့ပါ ခေါ်သေးတယ်။ "အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်"၊ "ကုသဘို့ရာ အမျိုးသမီး မ-အင်္ဂါအမွှေးကို မီးရှို့ပြီး၊ အရှူခိုင်းရတယ်၊" "မဟုတ်ရင် သေနိုင်တယ်၊" လို့ ပြောကြတယ်။ သူ့အရပ်နဲ့သူ အခေါ်နဲ့ ကုသနည်းတွေ ရှိနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ဆရာဝန်တွေ သင်ရတဲ့ အထဲမှာ ပါတာတော့ မတွေ့သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ စွယ်စုံကျမ်းတွေမှာ စာတင်ခံရတဲ့အထိ ရှိပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လို Koro ခေါ်တယ်။ တရုပ်လို Shuk yang, Shook yong, Suo yang လို့ ခေါ်သတဲ့။ Koro ဟာ ရောဂါ တခု အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပြီ။ အမေရိကန် "စိတ်ရောဂါ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် စာရင်းဇယား အညွှန်း" ထဲမှာ ထည့်သွင်း ထားတာ တွေ့လာရတယ်။ "ယဉ်ကျေးမှု အခြေပြု စိတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အုပ်စု" ထဲမှာ ထည့်ထားပါတယ်။ Disease ရောဂါလို့ မပြောဘဲ Syndrome လက္ခဏာ-အစုအဝေး လို့ ခေါ်တယ်။
Koro ဆိုတဲ့ စကား မူလအစက အင်ဒိုနီးရှား တောင်ပိုင်း ဆူလာဝေစီ ကနေ လာတယ်။ Shrinkage "သေးငယ်-တိုတယ်" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ တရုပ် နဲ့ မလေးမှာလဲ အဓိပ္ပါယ်တူ စကားလုံးတွေ ရှိတယ်။ အာသန် နဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံတွေမှာလည်း သူ့အခေါ်နဲ့သူ ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်က ညံ့သလား မမေးနဲ့ ဗမာတွေမှာ အဲလိုရှိတာ သူများတွေ မသိကြသေးဘူး။ တယောက် လောက်ကနေ MySpace နဲ့ YouTube ကနေ ဗီဒီယိုဖိုင် တင်ပေးရင် နာမည်ကြီးနိုင်တယ်။
Koro ဆိုတာ ရုတ်တရက် အပြင်းအထံ ယောက်ျားက "သူ့လိင်တံ Genital shrinkage တိုရာ၊ သေးရာကနေ Genital retraction ကိုယ်ထဲ ၀င်သွားမယ်-တယ်" ဆိုတဲ့ ရောဂါဆန်းတခု ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာ နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တယ်။ နာရီနဲ့ ရက်နဲ့ အထိ ကြာသတဲ့။ နာတာရှည် သမားလည်း ရှိသတဲ့။ ဒါ့ပြင်လဲ ကျားအင်္ဂါ ပုံပန်း ပြောင်းသွားတာ၊ အားနည်းသွားတာ၊ ဖြစ်သူတွေ ရှိသတဲ့။ မိန်းမတွေမှာလည်း "သူ့နို့သီးထိပ်ဖျား၊ ဒါမှမဟုတ် မ-အင်္ဂါ အထဲထဲ ၀င်သွားမယ်-တယ်" လို့ ရှိသတဲ့။
ဘာလို့ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာတွေထဲမှာ Psychosexual conflicts လိင်-စိတ် အထာမကျတာ၊ Personality factors သူဘဲ ဖြစ်နေတာ ဆိုတဲ့ တကိုယ်ရေ ပြဿနာ၊ Cultural beliefs ယဉ်ကျေးမှုအရဆိုတဲ့ ရိုးရာ-အစဉ်အလာ တူကြသူတွေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံနေတာတွေ ပါတယ်။ ဒီသဘောမျိုးဟာ လိင်ဆက်ဆံဘက် အများကြီး ရှိတတ်သူ။ ကိုယ့်ဖါသာ အာသာ ဖြေတာကို အပြစ်ကြီးထင်မှတ်သူ၊ ပန်းညှိုးသူတွေမှာလိုဘဲ Sexual adjustment လိင်နဲ့ ပတ်သက်တာမှာ အထာ မကျသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်းစစ်သူတွေက စိတ်နဲ့ ဆိုင်တာနဲ့ မဆိုင်တာ၊ လုံးဝ နဲ့ တ၀က်တပျက်၊ ကြိုးစားပြီး အမျိုးအစား ခွဲနေကြတယ်။ ဆေးဝါး သုံးလို့ ဖြစ်တာ၊ ဦးနှောက်-အာရုံကြော ရောဂါ စသဖြင့် ပါတယ်။ ဖြစ်လို့ သေတော့မှာဘဲ ထင်တာကတော့ Anxiety neurosis ကြောက်စိတ်ဝင် ရောဂါ အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ဆိုတယ်။ အနောက် နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်တာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ အာရှသားတွေလို သေမယ်လို့ သိပ်မထင်ကြဘူး။
တရုပ်မှာ ဒါမျိုး များတယ်။ တရုပ်ရိုးရာ ဆေးကျမ်းမှာ ဒီလိုဖြစ်တာကို ၂ မျိုးခွဲထားတယ်။ အသဲနဲ့ ကျောက်ကပ်မှာ Yin and Yan မျှခြေလွဲ ဖြစ်တဲ့ လိင်ရောဂါတဲ့။ သိတဲ့အတိုင်း ဧကရာဇ်တွေ လက်ထက်မှာ Eunuch ဆိုတဲ့ မိန်းမစိုး သင်ကွပ်ထားတဲ့ ယောက်ျားတွေ ရှိခဲ့တယ်။ တရုပ် Taoism အယူအဆထဲမှာ သုတ်ထွက်များတာ မကောင်းဘူးလို့ ယူဆတာဟာ ခေတ် ဆေးပညာနဲ့ ကွဲလွဲနေတယ်။ တရုပ်မှာ ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ တစ္ဆေ၀တ္ထုထဲမယ် Fox spirit မြေခွေး-၀ိဥာဉ်ကနေ ခွန်အားနဲ့ လိင်ပိုင်းကို အများကြီး အားနည်းစေတယ်လို့ ရေးထားတာမို့ ဖတ်တဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ကို လွှမ်းမိုးနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တိုဝင်တာလည်း တစ္ဆေပြုစားတယ်လို့ မှတ်ထင်ကြတယ်။
ဆေးပညာအရ ကုသနည်းက စိတ်ရောဂါကုသနည်း အခြေခံတယ်။ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပြီး၊ လိင်အင်္ဂါရဲ့ ခန္ဓာဗေဒကို ရှင်းပြရတယ်။ Penis ကျားလိင်အင်္ဂါဟာ Pubic bone ဆီးစပ်ရိုး ကို Suspensory ligament အရွတ်နဲ့ ဆက်နေတာမို့ ဘယ်လိုမှ အထဲဝင်မသွားနိုင်ဘူး။ လိုသေးရင် စိတ်ဆေး ပေးပါမယ်။
ရိုးရာနည်းတွေမှာလည်း ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အပေါ် မူတည်ပြီး ကုတယ်။ တစ္ဆေထင်ရင် ဘုရားတို့ နတ်တို့ ပူဇော်တာ၊ ပသတာ၊ လုပ်တယ်။ မောင်ထုပြီး အပထုတ်တယ်။ ကျား၊ သမင်၊ စတဲ့ အကောင်တွေကနေ ထုတ်တဲ့ ဆေးတွေ ပေးတယ်။ pepper soup, ginger soup ချင်း၊ ငရုပ်ကောင်း ဟင်းချို တိုက်သေးတယ်။ ကာကွယ်နည်းအနေနဲ့ သိပ်စိုးရိမ်သူတွေက လိင်အင်္ဂါ အထဲ မ၀င်အောင် သူတို့ဖါသာ ကြံဖန် လုပ်တတ်ကြတယ်။ မိန်းမတွေလည်း လုပ်ကြတယ်။ ဆေးပညာအရ အန္ထရာယ် မကင်းတာတွေ ဖြစ်လို့၊ နည်းတွေကို မရေးတော့ပါ။
တိုဝင်တာကို "Penis panic" လို့ ခေါ်ကြတယ်။ လိင်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျီးလန့်စာစား ချောက်ချားစိတ်ဝင်တာလို့ ပြောချင်တာပါ။ စိတ်ဖိအားများတာ၊ အပူချိန်နည်းတာ၊ လန့်စိတ်ဝင်တာမျိုးတွေက ဖြစ်စေတယ်။ Adrenaline အပြင် မူးယစ်ဆေးအုပ်စုထဲက Amphetamine, Cocaine တွေရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကနေလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
Posted by Alex Aung at 9:27 PM No comments:
ကြော်ငြာရှင်တွေဟာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကြော်ငြာကြတာလဲလို့ ကျွန်တော်ကမေးရင် ကြော်ငြာရှင်များက "ဖြေစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းကြီး" လို့ပြောကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို လူတွေသတိပြုမိဖို့ ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်သုံးစွဲမိဖို့(Trial) နဲ့ အခါခါထပ်ပြီးဝယ်ယူ (Repeat Purchase) ကြတဲ့အတွက် မိမိရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားပိုပြီးတက်လာဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကြော်ငြာလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလို၊ အကျိုးမရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုရင် ခင်ဗျားလက်ခံပါ့မလား။ ခင်ဗျားကကြော်ငြာလောကသားဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောမှာပါ။ ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကျွန်တော် တင်ပြပါ့မယ်။ ၂၀၁၀ အနှောင်းပိုင်းမှာ Marketing Research Journal ထဲမှာ ဒီဖြစ်ရပ်အကြောင်းကို ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။
Northwestern University's Kellog School of Management ဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား ဦးရေ (၁၂၀၀)ကို အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး လေ့လာမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားတွေကို အရက်ဆန့်ကျင်ရေးပိုစတာနမူနာတွေကို ပြပြီးတော့ ဒီကြော်ငြာတွေအပေါ် တုန့်ပြန်ချက်တွေကို မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အရက်ဆန့်ကျင်ရေး ကြော်ငြာတွေကို အခြေခံပြီး နမူနာပိုစတာများကို ဖန်တီး(create) ခဲ့တာပါ။
ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကတော့ အရက်ကိုအလွန်အကျွံသောက်လိုက်မိလို့ လူမှန်းမသိဖြစ်သွားရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ရှက်စရာကောင်း တယ်၊ ဒါကြောင့် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
(၁) ခင်ဗျားမျက်စိထဲမြင်လာအောင် ကနေဒါနိုင်ငံအရက်ထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့က ထုတ်လုပ်တဲ့ပိုစတာအကြောင်းကို ပထမဆုံး ပြောပြာပါမယ်။ အဲဒီပိုစတာကတော့ အမူးလွန်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အိမ်သာအိုး(commode)ထဲကို အန်ချနေတာကို အပေါ်စီးကရိုက်ပြ ထားတဲ့ပိုစတာပါ။ "ကျွန်တော့်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးရဲ့ အကောင်းဆုံးညပါပဲ" ဆိုတဲ့စာတမ်းကို သူ့ခေါင်းနဲ့ တစ်ပြေးညီမှာ ပုံနှိပ်ထားပါ တယ်။
(၂) ဒုတိယပိုစတာကတော့ ကနေဒါနိုင်ငံ Sashatchewan ပြည်နယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်လုပ်တဲ့ပိုစတာပါ။ အမျိုးသမီး ငယ်တစ်ဦးဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မှောက်လျက်လဲနေရင်း ညာဘက်လက်က အရက်ပုလင်းကို ကိုင်ထားပါတယ်။ ပိုစတာဓာတ်ပုံရဲ့ အောက်တည့်တည့် မှာတော့ "ဒီနေရာဟာ သူနေတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းအဆောင်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး" လို့ပုံနှိပ်ထားပါတယ်။
ကြော်ငြာဖန်တီးသူတွေကတော့ အရက်အလွန်အကျွံသောက်လိုက်မိလို့လူမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ ရှက်စရာ ကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့် အပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုတာကို လူငယ်တွေသိစေချင်၊ နားလည်စေချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ နမူနာပိုစတာတွေ ကြည့်ပြီး နောက် လူငယ်အများစုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကတော့ ကြော်ငြာဖန်တီးသူတွေ မျှော်မှန်းထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့လူငယ်တွေဟာ ဒီ ကြော်ငြာတွေကို မြင်မြင်ချင်းပဲ လက်မခံတဲ့တုန့်ပြန်မှုတွေပြသကြပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ဒီပိုစတာကို ကြည့်ပြီးတာနဲ့ အရက်သွားသောက် ဖို့တောင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုတုန့်ပြန်ကြတာပါလဲ။
ဒီလေ့လာချက်ပြုလုပ်တဲ့ ကောလိပ်က မားကတ်တင်းပါမောက္ခ ရဲ့မှတ်ချက်က "မိမိမှာ အပြစ်ရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရှက်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာမျိုး ခံစားနေရတဲ့လူတွေဟာ နောက်ထပ် ဒီလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရရင် 'ဒါဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး' လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ကာကွယ်တွေးတောပြီး မိမိကိုပြတဲ့ ပိုစတာမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာကို ခေါင်းထဲအ၀င်မခံပါဘူး။ ဒါမှသာ သူတို့ရဲ့ ခံစားမှုဟာ သက်သာ ရာရမှာပါ" လို့ပြောပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ လူဆိုတာ(အတန်းကျောင်းစပြီးနေတဲ့ အရွယ်ကစပြီး) ကိုယ်လုပ်တာမှန်တယ် မမှန်ဘူး၊ သင့်တော်တယ်၊ မသင့်တော်ဘူးဆိုတာကို သိပါတယ်။ မသိလို့ လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ချင်လို့ လုပ်ခွင့်ရလို့ လုပ်နေတာပါ။
ဒါပေမဲ့ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ပြီးရင်တော့ မသိစိတ်ထဲမှာ 'ငါအပြစ်လုပ်မိပြီ' လို့ ခံစားရပါတယ်။ လူရဲ့သဘာဝအတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြေပေးပြီး ဒီလိပ်ပြာမလုံတာကို ဖျောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် မလုပ်သင့်တာကို မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ဒီလိပ်ပြာ မလုံတဲ့စိတ်ဟာ ပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူး။
ပါမောက္ခ Agrawal က နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောတာကတော့ 'ရှင်ဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို စာမေးပွဲမှာ စာခိုးချတဲ့အကြောင်း ပြောနေရင်း နမူနာပိုစတာတစ်ခုကိုသာ ပြလိုက်ရင် သူဟာအရက်ဆိုင်ကို တန်းပြီးသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မလောင်းရဲတယ်' ဟုဆိုပါတယ်။
နောက်ဥပမာလေးတစ်ခု ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ အတုမြင်၊ အတတ်သင်တတ်တဲ့သဘာဝနဲ့ ကြော်ငြာတွေကြောင့် ဖြစ်လာတတ်တဲ့ ဘေး ထွက်ဆိုးကျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်မြင်သံကြားဟာ အကျယ်ပြန့်ဆုံး မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးကလေးမရွေးကြည့်ကြပါတယ်။ ကျောင်းမနေသေးတဲ့ ကလေးတွေတောင်မှ ကြော်ငြာသီချင်းအတော်များများကို လိုက်ပြီးဆိုနိုင်ခြင်း၊ သရုပ်ဆောင်အတော်များများကို နာမည်နှင့်လူတွဲပြီး သိနေခြင်းတို့ကိုထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် ကြော်ငြာပရိတ်သတ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကလေးပရိတ်သတ်ပမာဏကို ခန့် မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အချို့မိဘတွေဆိုရင် တီဗွီကြော်ငြာကို တိပ်ခွေတစ်ခွေလုံး (VHS tape) အပြည့်သွင်းထားပြီး ကလေးငြိမ်နေရန် ပြထားတတ်တာကိုတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ နောက်ဆုံးအပတ်ထဲမှာ ထီးကြော်ငြာလေးတစ်ခုကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ အဆောက်အဦတစ်ခုအပေါ်ကနေ ထီးကိုလေထီးသဘောမျိုးအသုံးပြုပြီး လူကြီးနှစ်ယောက်ခုန်ချတဲ့ပြကွက်ကိုပြသွားပါတယ်။ ထီးရဲ့ခိုင်ခံ့မှုကို တင်စားဖော်ပြသွားတာ ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တစ်ဦးမှာ ပထမတန်းကျောင်းသားတစ်ဦးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတွင်ရှိသော အဒေါ်များပို့ပေး လိုက်သော စူပါမင်းဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး မိမိနေထိုင်သော ပထမအထပ်ပြတင်းပေါက်မှ လမ်းပေါ်သို့ခုန်ချရာမြေညီထပ်တွင်မိုးထားသော တာပေါ်လင်အမိုးခံနေသောကြောင့်သာ သေတွင်းထဲမရောက်ခဲ့ပါ။
နောက်ထပ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၏မောင်တစ်ဝမ်းကွဲမှာတော့ လှေခါးတိုင်တွင် အပ်ချည်ကြိုးတစ်စချည်၊ မိမိခါးတွင် တစ်စချည်ပြီး လှေ ကားထိပ်မှ ခုန်ချ၍ စပိုက်ဒါမင်းလုပ်တမ်း ကစားရာမှ နဖူးကွဲသွားပါသည်။ နဖူးကွဲသည်နှင့် ပြီးသွား၍သာတော်ပါတော့သည်။
ထီးကြော်ငြာကိုကြည့်ပြီး ကလေးတစ်ဦးဦးက ယင်းထီးကိုဖွင့်ဆောင်းကာ အိမ်ဝရံတာ၊ ကျောင်းဝရံတာကနေ ခုန်ချလိုက်ရင်တော့ ကလေးရဲ့ကံကြမ္မာကို တွေးမကြည့်ဝံ့ပါ။
ပြောချင်တာကတော့ ကြော်ငြာတစ်ခုဖန်တီးရာမှာ မိမိကြော်ငြာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံဟာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတွက်၊ အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အကျိုးအပြင် အပြစ်ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာကို ထည့်ပြီး စဉ်းစားနိုင်ကြရင် ကောင်းမှာပါဆိုတာပါပဲ။
Resource: UNFCCI – Business – Vol: 10, No.4 – June 2010
Posted by Alex Aung at 4:17 PM No comments:
လီဗိုက်စ်ဂျင်း(Levi's Jeans) တွေဟာ ဈေးမြင့်လွန်းပြီး အနောက်နိုင်ငံက စစ်အေးတိုက်ပွဲတွေမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား တိုးရစ်တွေက ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုကို ပြည်ဝင်ခွင့်ရရင် အပြန်လေယာဉ်ပျံလတ်မှတ်ဖိုး ရနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်တာကြောင့် Levi's ဂျင်းဘောင်းဘီတွေကို မှောင်ခိုကုန်အဖြစ် ယူသွားလေ့ရှိကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အခုအချိန်အထိတောင်မှ ဒီလိုလဲလှယ်မှုတွေဟာ ရုရှားနိုင်ငံပြည်နယ် တချို့မှာ ပြုလုပ်နေကြတုန်းပဲလို့ သိရပါတယ်။
Levi's ဂျင်းတွေထဲမှာ 501 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ပုံစံကို လူကြိုက်အများဆုံးပါပဲ။ 501ဟာ မင်းသား ဂျိမ်းစ်ဒင်း(James Dean) နဲ့ မာလွန်ဘရန်ဒို (Marlon Brando) ခေတ်ကတည်းက ခေတ်စားပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း ဒီနင်းမ် (Denim) ဂျင်း တွေပေါ်လာတော့ အပြိုင်အဆိုင် ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် Levi's က အခုခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ မိဘဘိုးဘွားလက်ထက်ကတည်းက သုံးစွဲ ခဲ့ကြတာကြောင့် ကုန်အမှန်တံဆိပ် (brand) တစ်ခုကို အစဉ်တစိုက် သုံးခဲ့တဲ့ အစွဲအလမ်းတွေနဲ့ ပန်းပန်လျက်ပါပဲ။
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ဂျင်း ဈေးကွက်မှာလည်း Levi's က ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Nike နဲ့ Gap ဂျင်း တွေကြောင့် Levi's ဂျင်းတွေဟာ ခေတ်နောက်ကျနေပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်စေခဲ့တဲ့အတွက် အကျပ်အတည်းပြဿနာနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Levi's ဟာ သူ့ ဖောက်သည်တွေ လျော့မသွားအောင်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မထိခိုက်အောင် ထိန်းထားနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
၁၉ ရာစုနှစ်တွေတုန်းက Levi's ရဲ့ဖောက်သည်တွေဖြစ်တဲ့ မိုင်းတွင်းလုပ်သားတွေ၊ လယ်သမားနဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ဂျင်းန် ဘောင်းဘီ အသစ်ကြောင့် သူတို့ရဲ့တင်ပါးတွေ ကြီးသယောင် ထင်ရတယ်လို့ ထင်မှတ်ကြတယ်။
Levi's ကို စတင် တီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ Levi's Strauss ဆိုသူရဲ့ ပထမအမည်ဟာ အရင်က Loeb ဖြစ်တယ်။ ဘာဘေးရီးယား(Bavaria) ကနေ အမေရိကကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ ပြီး အမေရိက အနောက်ဘက် တစ်နယ်လုံးကို လက်ကိုင်ပ၀ါ၊ စောင်နဲ့ အ၀တ်အထည်တွေကို ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့မှာ အခြေတည်ပြီး စတိုးဆိုင်ကြီးတွေကို လက်လီလက်ကား ဖြန့်ချိရောင်းချတဲ့ လုပ်ငန်းနဲစခဲ့ပါတယ်။
Levi's ရဲ့ဖောက်သည် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စက်ချုပ်သမား Jacob Davis က Levi's ဘောင်းဘီတွေမှာ အိပ်ကပ်လေးတွေကို သံမှိုနဲ့ စွဲကပ် ပြီးချုပ်ဖို့အကြံပြုခဲ့တာပါ။ နောက်ပြီး Jacob ကပဲ သူနဲ့အတူ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ပြောခဲ့တဲ့အတွက် ၁၈၇၃ခုနှစ်ကစပြီး သူတို့ရဲ့ ပုံစံ ဒီဇိုင်းတွေကို မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသံမှိုပါတဲ့ ဘောင်းဘီတွေမှာ ခြေစွပ်ရှည်ဆိုင်းထားဖို့ ဆိုင်းကွင်း(suspenders) မှာ ကြယ်သီးတပ်ထားပေးသလို ဘောင်းဘီနောက် ဘက်မှာလည်း အိပ်ကပ်တစ်ခု ထည့်ထားပေးပါတယ်။ ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာတော့ ခါးနောက်ဘက်မှာ မြင်းနှစ်ကောင်က ဘောင်းဘီကို ဆွဲဖြဲတဲ့ ပုံစံကို သားရေနဲ့ အစပ်အဖာ ပုံစံထွင်ပြီး ထည့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ် လောက်မှာတော့ Levi's က ဘောင်းဘီရဲ့ခါးနေရာတွေ မှာ နံပါတ် 501 အမှတ်အသားထည့်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၆ခုနှစ်မှာတော့ ဘောင်းဘီနောက်ဘက်က အိတ်ကပ်နေရာမှာ Levi's ဆိုတဲ့နာမည်ကို အနီရောင်အောက်ခံမှာ အပ်ချည်အဖြူရောင်နဲ့ ရေးထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီချုပ်ရိုး၊ အစပ်အဖာပုံစံ၊ စာတန်းနဲ့ နံပါတ် 501ဟာ Levi's ရဲ့ အမှတ်အသား သင်္ကေတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များဆီက Vogue မဂ္ဂဇင်းက အလုပ်သမား လူတန်းစားတွေ အ၀တ်များတဲ့ Denim ဂျင်းဖက်ရှင်က ခေတ်စားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပေမယ့် ၁၉၅၀ပြည့်နှစ်များဆီက ပုန်ကုန်ထကြွတဲ့ပုံစံဖမ်းထားတဲ့ Levi's ကိုပိုနှစ်သက်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နယူးယောက်မှာ Levi's ဂျင်းတွေအ၀တ်များကြတာဟာ တူညီဝတ်စုံ ၀တ်ထားသလိုကို ဖြစ်တော့တာပါ။ အနောက်ပိုင်းက ဟစ်ပီတွေကကျတော့ Levi's ဘောင်းဘီမှာ ပန်းတွေနဲ့တောင်မှ အလှဆင်ကြပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ Denim ကရေပန်းစားတယ်။
၁၉၆၆ခုနှစ်မှာတော့ Foote Cone & Belding ဆိုတဲ့ကြော်ငြာအေဂျင်စီက Levi's အတွက် ပထမဆုံး ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် စောစောပိုင်းမှာတော့ Mike Koelker ဆိုတဲ့ကြော်ငြာသမား Copy Writer က Levi's ရဲ့ ငွေစာရင်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၄ခုနှစ် Levis Strauss ရဲ့မြစ် တူတော်မောင် Bob Hass ဆိုသူက Levi's လုပ်ငန်းမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ Koelkar ကငွေစာရင်း အပိုင်းမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ တီထွင်ဖန်တီးရေး ဒါရိုက်တာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Koelkar နဲ့ Hass တို့ဟာ ကိုယ်စားလှယ် အေဂျင်စီ လုပ်ငန်းနဲ့ ဖောက်သည်တွေအကြား ရောင်းဝယ်ရေး ပြဿနာတွေကို လက်တွဲပြီး ဖြေရှင်းကြတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များဟာ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းတဲ့ ကာလတွေဖြစ်တယ်။ Koelker ဟာ စီစဉ် ညွှန်ကြားနိုင်ရေးပြည့်ဝသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Levi's ဂျင်းကို လူတွေ မမေ့နိုင်ဘဲ တသသဖြစ်နေအောင်နဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ရှိအောင် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပွဲတွေ မကြာခဏ လုပ်ပေးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် 501ဂျင်းကို အမေရိကန်တွေရဲ့ အနှစ်သာရ စံပြုရတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ် ရောက်အောင် ပြုလုပ်ပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိကတော့ အနှောင့်အယှက် ကင်းကင်း ပျောရွှင်အောင်မြင်တဲ့ ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့ Levi's ရဲ့ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ် Bartle Bogle Hegarty က Levi's ကို အမျိုးသားစူပါမော်ဒယ် Nick Kamen နဲ့ ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Levi's ဂျင်းဘောင်းဘီဟာ တစ်ခါတည်းနဲ့ အထည် ၈၀၀,၀၀၀ရောင်းရပြီး အရောင်းစံချိန်တင်သွားခဲ့တယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ Levi's အတွက် အခြေအနေ ယိမ်းယိုင်စ ပြုလာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Mike Koelker က အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးခွင့်ယူလိုက်ရလို့ပါပဲ။ ဒါဟာ Levi's အနေနဲ့ Denim နဲ့ အပြိုင် ကြိုးစားနေရချိန်မှာ အားလျော့သွားတော့တာပါ။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ Hass က Philip Marineau ကို ကုမ္ပဏီမှာ ခန့်လိုက်ပါတယ်။ Marineau ဆိုသူက အရင် ပက်ပ်စီကုမ္ပဏီ (Pepsi Co) မှာ လုပ်ခဲ့သူပါ။ သူကတော့ ထုတ်ကုန်ပိုင်းကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တစ်လိုင်းတည်း သွားနေတဲ့ ထုတ်ကုန်ကနေ တခြားတန်ဖိုးမြှင့်ထားတဲ့ Red နဲ့ ကုန်တိုက်ကြီးတွေပေါ်မှာသာ တင်ရောင်းတဲ့ Signature တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အမြောက်အမြား တင်ရောင်းတဲ့ WalMart မှာဆိုရင် အနိမ့်ဆုံးဈေး ၉ဒေါ်လာအထိ ဈေးလျှော့ရောင်းတာမျိုးတွေနဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အခွဲအသစ်တွေကလည်း အရည်အချင်း ပြည့်မီစေဖို့နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့အတွက် ထိန်းသိမ်းပြီး ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Levi's ဟာ ခေတ် ပြိုင်တခြား ဂျင်းဘောင်းဘီ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ အပြိုင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဈေးကွက်အပြောင်းအလဲတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Levi's ဟာအရင်တုန်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အရှိန်အ၀ါ၊ သြဇာကြီးမားပြီး လွှမ်းမိုးမှုကို ပြန်လည် ရရှိနိုင်မလားဆိုတာကို Marineau ကတော့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Credit: Tharapu Magazine Feb 2011
Posted by Alex Aung at 3:21 PM No comments:
အမျိုးသားတွေအတွက် ငွေကုန်ကြေးကျမများဘဲ နုပျိုသွားေ...
မျှစ်ချဉ်နဲ့ဝက်သား၊ ငါးကျည်းခြောက်ကြော်၊ ငါးပိထောင်း
ဖိလစ်ပိုင်ရိုးရာ ငါးခေါင်းဟင်းချို ဒါမှမဟုတ် ကော်ြ...
ဖြစ်လာမှ တုံ့ပြန်ခြင်းထက် အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ဖန်...
မျိုးပွားအင်္ဂါများတွင် ဖြစ်တတ်သော ကြွက်နို့ Genital...